Ikraan Tahliil: Ka hadalka kiiskeeda oo dib u soo cusboonaaday - Bulsho News
Ku-xigeenka Xoghayaha Guud Ee QM Oo La Kulantay Madaxda Dowlada...
Waxaa isa soo taraya cadaadiska dowladda lagu saarayo inay faahfaahin ka bixiso kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ka tirsaneyd hay’adda sirdoonka iyo Nabad sugidda Soomaaliya (NISA).
Gabadhaas oo laba bilood ka hor la afduubtay waxaa qoraal dhowaan soo baxay lagu sheegay in “Al-Shabaab ay gacanta u gashay, ka dibna ay dileen”.
Ururka Al-Shabaab iyo waalidiinta Ikraan ayaa beeniyay arrintaas. Waxayna taa dhalisay hadal-hayn aad u badan.
Waaliddeenteeda waxay sheegeen in aysan ku qanacsaneyn warka dowladda ka soo baxay isla markaana ay codsanayaan inay helaan caddaaladda.
Waxaa Soomaaliya ku sugan wafddi ka socda Qaramada Midoobey oo ay hoggaamineyso Ku Xigeenka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Amina Jane Maxamed oo kulamo kala duwan la yeelatay masuuliyiinta dowladda.
Amina Jane Maxamed oo wax laga weydiyay kiiska Ikraan, waxay ku jawaabtay, “in sarreynta sharciga iyo helitaanka caddaaladda ay muhiim u yihiin ka hortagga rabshadaha waana xuquuqda haweenka oo dhan”.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa wafddiga Qaramada Midoobey u sheegay inay mas’uuliyad ka saaran tahay sidii ay caddaaladda ku heli lahayeen qoyska Ikraan Tahliil.
Wuxuu sheegay in ‘in aysan habbooneyn in la siyaasadeeyo kiiska Ikraan” sida uu baahiyay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Waxaa cirka isku sii shareerayay khilaafka iyo muranka ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo sidoo kale ka soo shaqeysay xafiiska Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, xilligii Yariiso uu ahaa maayarkii magaalada, kaas oo ku dhintay qarax ka dhacay xafiiskiisa.
Khilaafka kiiiska Ikraan wuxuu bilowday markii Ra’iisul Wasaaraha uu shaqo joojin ku sameeyay taliyaha sirdoonka Soomaaliya, Fahad Yaasin, tallaabadaas oo ahayd mid uu madaxweyne Farmaajo diiday. Ka dib Fahad waxaa loo magacaabay La-taliyaha madaxweynaha ee dhanka amniga.
Aabaha dhalay Ikraan Tahliil ayaa madaxweynaha ku eedeeyay “in uu hor istaagayo” kiiska Ikraan in “cadaalad loo helo”.
Wuxuu ka codsaday hay’adda Nisa in gabadhooda haddii ay nooshahay ay xoriyaddeeda dib usoo celiyaan ama meydkeeda ay siiyaan haddii la dilay.
“Waxaan ka rabnaa hay’adda NISA haddii ay hayaan Ikraan iyadoo nool in si degdeg ah ay xornimadeeda ugu soo celiyaan, haddii la dilay in meydkeeda lana siiyo si aan u aasno,” ayuu yiri Tahliil Faarax oo u warramayay teleefishinka Universal.
Tahliil Faarax wuxuu intaa ku daray in kiiska Ikraan aanan lagu dhameyn doonin qaab wadahadal ah balse ay doonayaan “in cadaalladda ay horkeenaan dadka lagu helo in ay ka dambeeyeen dilka gabadhooda.”
Dhawaan ayay aheyd markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Ikraan Tahliil oo in muddo la la’aa ay gacanta u gashay Shabaab isla markaana ay dileen.
Dowladda wax faahfaahin kama aysan bixin sida uu u dhacay dilka Ikraan ama halka uu ku dambeeyay meydkeeda.
Qoyskeeda waxay codsanayaan in dowladda jawaab faahfaahsan ka bixiso qaabka uu u dhacay dilka iyo in caddaaladda la horkeeno dadkaa ka dambeeyay falkaas.
Shabaab waxay dhankooda sheegeen in “aysan dilin Ikraan ayna la fajaceen marka ay maqleen dilka gabadhaas iyo in iyaga loo sarinaya”.
Sidaa darteed waxaa la is weydiinayaa yaa dilay Ikraan, meydkeydase aaway, yaase abaalay gorma ayaase la xabaalay?
Xaqiiqooyinka Laga Diwaan Galiyay Kulankii Ay Arsenal Garaacday...
George Wein, Newport Jazz Festival co-founder, dies at...
Cumar Axmed: Soomaali orod-yahan ah oo ku guuleystay...